Canada akwụsịla njem na mba South Africa n'ihi Omicron
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Pịa ebe a ma ọ bụrụ na nke a bụ ntọhapụ mgbasa ozi gị! » Canada akwụsịla njem na mba South Africa n'ihi Omicron
Kemgbe mmalite nke ọrịa a, gọọmentị Canada etinyela usoro n'ókè anyị iji belata ihe ize ndụ nke mbubata na nnyefe nke COVID-19 na ụdị ya dị na Canada metụtara njem mba ụwa. Taa, Minista na-ahụ maka ụgbọ njem, Honorable Omar Alghabra na Minista ahụike, Honorable Jean-Yves Duclos, kwupụtara usoro ókèala ọhụrụ iji chebe ahụike na nchekwa nke ndị Canada.
Dị ka ihe akpachara anya, ruo Jenụwarị 31, 2022, gọọmentị Canada na-emejuputa usoro oke ókè maka ndị njem niile nọ na mpaghara South Africa - gụnyere South Africa, Eswatini, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Mozambique na Namibia - n'ime. ikpeazụ 14 ụbọchị tupu ị bịarute Canada.
A gaghị ekwe ka ndị mba ofesi bụ ndị mere njem na mba ndị a n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga ịbanye Canada.
Citizensmụ amaala Canada, ndị bi na-adịgide adịgide na ndị nwere ọkwa n'okpuru Iwu India, n'agbanyeghị ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ha ma ọ bụ nwee akụkọ ihe mere eme nke nnwale gara aga nke ọma maka COVID-19, ndị nọ na mba ndị a n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga ga-enwerịrị nnwale. , nyocha, na usoro iche iche.
A ga-achọrọ ndị a ka ha nweta, n'ime awa 72 nke ọpụpụ, nnwale molekul COVID-19 na-adịghị mma na obodo nke atọ tupu ha aga n'ihu njem ha na Canada. Mgbe ha bịarutere Canada, n'agbanyeghị ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ha ma ọ bụ nwee akụkọ nyocha gara aga nke ọma maka COVID-19, ha ga-enyocha ule mbata ozugbo. A ga-achọkwa ka ndị njem niile mechaa ule n'ụbọchị 8 ka ha bịarutere wee kewapụ iche maka ụbọchị iri na anọ
A ga-eziga ndị njem niile na ndị ọrụ Health Health Agency nke Canada (PHAC) ka ha hụ na ha nwere atụmatụ iche iche dabara adaba. A ga-achọrọ ndị na-eji ikuku bịarute ka ha nọrọ n'ebe a na-adọpụ iche ka ha na-eche nsonaazụ ule mbata ha. Agaghị ekwe ka ha gaa njem ruo mgbe akwadoro atụmatụ iche iche ha wee nweta nsonaazụ ule mbata na-adịghị mma.
Enwere ike ịhapụ ndị na-abịa site n'ala ka ha gaa n'ihu ozugbo gaa ebe dịpụrụ adịpụ kwesịrị ekwesị. Ọ bụrụ na ha enweghị atụmatụ dabara adaba - ebe ha na onye ọ bụla ha na-agabeghị njem na-agaghị enwe mmekọrịta - ma ọ bụ na-enweghị ụgbọ njem nkeonwe na-aga ebe a na-adọpụ iche, a ga-agwa ha ka ha nọrọ n'ebe a na-adọpụ iche.
A ga-enwekwu nyocha nke atụmatụ iche iche maka ndị njem si mba ndị a yana nleba anya siri ike iji hụ na ndị njem na-agbaso usoro iche iche. Ọzọkwa, a ga-akpọtụrụ ndị njem, n'agbanyeghị ọkwa ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa ma ọ bụ nwee akụkọ ihe mere eme nke nnwale mbụ maka COVID-19, ndị si na mba ndị a bata na Canada n'ime ụbọchị iri na anọ gara aga, a ga-akpọtụrụ wee gwa ka a nwalee ya na iche iche ka ha na-eche. nsonaazụ ule ndị ahụ. Enweghị mwepu ahaziri ahazi na ihe ọhụrụ a chọrọ.
Gọọmenti Canada na-adụ ndị Canada ọdụ ka ha zere ịga njem na mba ndị dị na mpaghara a ma ga-aga n'ihu na-enyocha ọnọdụ ahụ iji gwa omume ugbu a ma ọ bụ n'ọdịnihu.
Canada na-aga n'ihu na-edobe ule molekụla tupu ịbanye maka ndị njem mba ụwa gbara ọgwụ mgbochi na enweghị ọgwụ mgbochi na-abịa site na obodo ọ bụla iji belata ihe egwu nke mbubata COVID-19 gụnyere ụdị dị iche iche. PHAC anọwokwa na-enyocha data ikpe, site na nyocha amanyere amanyere amanyere amanyere iwu ka ị bata na Canada.
Gọọmenti Canada ga-aga n'ihu na-enyocha ọnọdụ na-agbanwe agbanwe ma mezie usoro oke ókè dịka achọrọ. Ọ bụ ezie na a na-enyocha mmetụta nke ụdị dị iche iche na Canada, ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa, yana ahụike ọha na nke mmadụ, na-arụ ọrụ iji belata mgbasa nke COVID-19 na ụdị ya.